ဥရောပတိုက်တွင်အများဆုံး Instagrammable သောနေရာများ:အဆိုပါ Bernina Express ကို: ဆွစ်ဇာလန် - အီတလီ
ဒီအထူးသဖြင့်လမ်းကြောင်းတွင်, သင် 1,142m မြင့် Brocken တက်ပါလိမ့်မယ်, မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အမြင့်ဆုံးအထွတ်အထိပ် ဂျာမနီ, ခံစား မြင်ကွင်းကျယ်အမြင်များ ပတျဝနျးကငျြရှုခင်း၏. ဒါပေမဲ့, သင်သာတောင်တက်နဲ့တူဖို့ Harz တောင်တန်းသွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မလိုပါ. တကယ်တော့, သငျသညျရေးတဲ့နတ်သမီးပုံပြင်နှင့်အတူကစားစရာမြို့များကိုကြိုက်လျှင်ပိုကောင်းမယ့် ရဲတိုက်, ယူနက်စကိုကမ္ဘာ့ရှေးဟောင်းအမွေအနှစ်ဆိုဒ်များ, fortresses ဆင္သူေ ကနေအလယ်ခေတ်အမြင်ရိုင်းတိရစ္ဆာန်များအတွက်သူတို့ရဲ့သဘာဝအလျောက်ကျက်. သင့်ရဲ့ Instagram ကိုအစာကျွေးခြင်းအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော!
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, သင်တို့သည်ငါတို့၏ဓါတ်ပုံနှင့်စာသား ယူ. ရုံနိုင်ပါတယ်ဖြစ်စေ ဤ blog post မှ link တစ်ခုနှင့်အတူကျွန်တော်တို့ကိုအကြွေးပေး, သို့မဟုတ်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmost-instagrammable-spots-europe%2F- (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အနည်းငယ်အောက်ကိုဆင်း)